जिल्ला प्रशासनबाट आठ करोड बढी राजस्व – Chitwan Post Daily | चितवन पोष्ट दैनिक
जिल्ला प्रशासनबाट आठ करोड बढी राजस्व
२०७१ श्रावण ५, सोमबार ०३:५१ गते
भरतपुर । जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवनले यस वर्ष राहदानी सिफारिस गरेबापत कुल आठ करोड ३३ लाख ६० हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ ।
प्रशासनको कुल राजस्व आम्दानी भने आठ करोड ९३ लाख २६ हजार ९१९ रुपैयाँ रहेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी नरेन्द्रराज शर्माले बताए । प्रशासनबाट कुल १६ हजार ३८२ जनाको राहदानी सिफारिस भएकोमा उल्लेखित राजस्व संकलन भएको हो ।
चितवन प्रशासनबाट गत आव २०७०÷०७१ मा कुल ३० हजार ४८२ जनाको राहदानी सिफारिस परराष्ट्रमा पठाइएको थियो । कुलमध्ये १४ हजार ७१ जनाले भने दु्रतमार्गबाट राहदानी बनाएका छन् । रु. दस हजार तिरेपछि दु्रतमार्गबाट राहदानी बनाउन सकिने व्यवस्था छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट सिफारिस भई यहीँबाट लिँदा भने जम्मा पाँच हजार रुपैयाँ लाग्छ ।
त्यस्तै प्रशासनले हातहतियार नवीकरणबाट २५ हजार ३१५ रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ । दण्ड जरिवानाबाट ५८ लाख ७८ हजार ५०४ रुपैयाँ र लिलाम सकारबाट ५२ हजार ५ सय राजस्व संकलन भएको छ ।
यसबीचमा सडक दुर्घटनामा मृत्यु भएका २२ जनाका परिवारलाई एक लाख २९ हजार ५ सय रुपैयाँ बाँडिएको प्रजिअ शर्माले जानकारी दिए । विदेशमा मृत्यु भई नजिकका हकदार ११ जनालाई ६७ लाख ५१ हजार ४२८ रुपैयाँ उपलब्ध गराइएको छ ।
प्रजिअ शर्माका अनुसार द्वन्द्वमा बेपत्ता एकलाई रु. तीन लाख र मृतक एकजनालाई रु.एक लाख बाँडिएको छ । गत एक वर्षमा ६६ पटक बजार अुनगमन गरिएको छ । कुल ६७१ ठाउँमा अनुगमन गरिएकोमा ४६ वटालाई खाद्य ऐनअनुसार मुद्दा चलाइएको शर्माले बताए ।
जिल्ला प्रशासनबाट कुल ११ हजार ५५५ जनाले नागरिकता लिएका छन् । आठ हजार ५९८ जनाले नागरिकताको प्रतिलिपि लिएको कार्यालयले जनाएको छ ।